About us - Ningbo Boyu okungangenwa Material Co., Ltd.
Ningbo Boyu izinto manzi Co., Ltd.
Ningbo Boyu izinto manzi Co., Ltd. A umenzi ngobuchule leyo uphando kunye nophuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kumashishini enye. ibekwe Chongshou indawo mveliso Cixi Ningbo, kunye ukufikelela zokuhamba lula.
Iimveliso eziphambili ze-polyurethane grouting foam, inwebu engenawo manzi, grouting packers pack, grouting pump, grease ingono kunye namalungu. Amandla okupakisha iziqwenga ezingama-120,000,000, Zonke iimveliso zethu zithobela imigangatho esemgangathweni yamazwe aphesheya kwaye ziyaxatyiswa kakhulu kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela.
Ukungena ngokupheleleyo emanzini, umgangatho yinkcubeko yethu. inkonzo OEM ukuze. Samkelekile ngokufudumeleyo kuphando lwakho malunga nobudlelwane beshishini lwexesha elide, ukuphuculwa Mutual, izibonelelo ezifanayo.
Sijolise ekuphuhliseni iimveliso ezikumgangatho ophezulu kwiimveliso zentengiso ephezulu. Iimveliso zethu ziyahambelana nemigangatho yamazwe aphesheya, kwaye ikakhulu zithunyelwa eYurophu, eMelika, eJapan nakwezinye iindawo kwihlabathi liphela.
Sineqela le-R & D elomeleleyo, kwaye sinokuphuhlisa kwaye sivelise iimveliso ngokwemizobo okanye iisampulu abathengi abazinikelayo.
Sinemveliso yethu, ke sinako ukubonelela ngexabiso kunye neemveliso ngokuthe ngqo.
Sinemigca yemveliso yokupakisha inaliti, kunye nomatshini wokumpompa inaliti. namalungu. I-polyurethane foam kunye nezinto ezingena manzi.
Imveliso yethu yonyaka ingaphezulu kwama-80,000,000, ii-pcs .sinokuhlangabezana neemfuno zabathengi abohlukeneyo ngobungakanani bokuthenga.
Kule minyaka, ngamandla omeleleyo obuchwephesha, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nezikhulileyo, kunye nenkqubo yenkonzo egqibeleleyo, siphumelele ngokukhawuleza, kwaye izalathiso zobuchwephesha kunye neziphumo ezibonakalayo zeemveliso zazo ziqinisekisiwe kwaye zanconywa sisininzi sabasebenzisi, kwaye bafumana isiqinisekiso iimveliso ezikumgangatho ophezulu, kwaye baye baba ishishini ezaziwayo-kakuhle kolu shishino.
Kwixesha elizayo, inkampani iya kuqhubeka inika umdlalo opheleleyo kwizibonelelo zayo, ihlala ihambelana nomgaqo "wokukhokela kwezenzululwazi kunye netekhnoloji, ukukhonza kwimarike, ukuphatha abantu ngokuthembeka kunye nokufuna ukugqibelela" kunye nefilosofi yequmrhu ye "iimveliso abantu ", bahlala besenza izinto ezintsha zetekhnoloji, izinto ezintsha, iinkonzo ezintsha kunye nendlela yolawulo, kunye nokuphucula iimveliso ezingenaxabiso ngakumbi ukuhlangabezana neemfuno zophuhliso lwexesha elizayo. Ngokusebenzisa izinto ezintsha ukuphuhlisa rhoqo iimveliso ezinendleko ngakumbi ukuhlangabezana neemfuno zophuhliso lwexesha elizayo, kwaye ngokukhawuleza ukubonelela abathengi ngexabiso eliphezulu, iimveliso ezinamaxabiso aphantsi kukusukela kwethu injongo ngokungapheliyo.